Global Voices teny Malagasy » Ejypta : Eo An-dalam-panaovana Ny Fifidianana Filoham-pirenena Malalaka Voalohany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2012 23:19 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny lahatsoratray manokana mikasika ny Fifidianana ao Ejypta 2011/2012 .
Hiditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena malalaka voalohany  eo amin'ny fireneny ry zareo Ejiptiana. Ilay fifidianana dia natao ny 23 sy 24 May , ary ny fihodinana faharoa dia 16 sy 17 Jona raha ilaina.
Olona dimam-polo tapitrisa no ekena fa afaka ny  hifidy. Raha toa ka filaharam-be no hita teny amin'ny toeram-pifidianana teny , toa vitsy nohon'ny tamin'ny fifidianana Parlemantera  ny volana Novambra 2011 kosa ny fandrasaa anjara. Mety mampiseho ny fahadisoam-panantenana  tsapan'ny maro amin'ireo kandidà ireo izany.
@tarekshalaby  : Ny faha 19 Martsa [ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalampanorenana ], Tao anatin'ny filaharana nanodidina io sekoly io aho. Amin'izao fotoana izao tsy misy olona intsony eo . Angamba atsy ho atsy …
@erinmcunningham  : Ny fanaova-mofo tao afovoan'ny Ismailia no filaharana lava sy navitrika kokoa noho izay toeram-pifidianana rehetra hitako hatramin'izay. #Egyelex‬ ‪#breadpolitics
@nsabry  : Ny tena iraisana aloha dia ny toetr'andro . Tamin'ny farany teo dia tamin'ny 2 ora tolakandro teo aho no nandeha nihodinkodina tany saingy tsy handeha ho any kosa androany raha tsy amin'ny 6:30-7 rehefa amin'ilay tsy misy olona & mangatsiaka kokoa iny
@akaHoezy  : Manonofy aho hoe any andro iray ny lehilahy& vehivavy afaka ny hiara-hijoro anaty laharana iray hifidy tsy amin'ahiahy. Ho tantara fahiny sisa ny resaka fanavakavahana. ‪#EgyElex
@adamakary  : Voalohany , asehonao ny Karapanondronao mba hampitoviana ny laharanao amin'ireo voarakitra hifidy. Avy eo, manao sonia ianao ‪#Suez‬ ‪#EgyElex
@adamakary  : Dingana faharoa, raiso ny vatom-pifidiananao . ‪#Suez‬ ‪#EgyElex
@adamakary  : Dia miandry ianao… miaraka amin'ny vatonao sy ny peninao eny an-tanànao. ‪#Suez‬ ‪#EgyElex‬
@adamakary  : Aorian'ny fisafidiananao ny kandidà tianao, dia arotsakao ao amin'ny vata mihidy ilay izy. ‪#Suez‬ ‪#EgyElex
@adamakary  : Farany, raisinao ny Karapanondronao, ataovy anaty ranomainty volomparasy ny rantsan-tananao, ranomainty sarotra esorina ary avy eo mandeha ianao. ‪#Suez‬ ‪#EgyElex
@Booky_Lillz  : Misy olona hafa naneho tsy fahazakàn'ny hodiny an'ilay ranomainty ve? Tahaka ny efa miha-mangidihidy aho! ‪#EgyElex‬ ‪#EgyPresElection
@NadeenHafez  : Nandany ora 3 sy sasany aho nifidy. Tena mendrika sy nilaina mihitsy izany. Izany rehetra izany ho anao, ry Ejypta! ‪#EgyElex‬ ‪#PresidentialElections
@elimam_o  : Apetrako fotsin, mbola tsy azoko mihitsy hoe andeha hifidyny ho filohan'i ‪#Egypt‬ aho. ‪#egyelex
@jfjbowen  : Nanontany vehivavy iray teo an-daharna aho hoe hafiriana no efa niandrasany izao. 30 taona hoy izy sady nihomehy mafy izy ‪#EgyPresElection
Raha mila mahafantatra bebe kokoa mikasika ny fifidianana filoha, jereo ity Storify  an ‘i Asteris Masouras ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/28/33531/
 Fifidianana ao Ejypta 2011/2012: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/egypt-elections-2011/
 no ekena fa afaka ny : http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18167224
 fifidianana Parlemantera : https://globalvoicesonline.org/2011/11/28/egypt-the-country-votes/
 fahadisoam-panantenana : http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/may/23/egypt-presidential-election
 ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny lalampanorenana : https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_constitutional_referendum,_2011
 sary ito : https://twitter.com/SultanAlQassemi/status/205228813838319616
 Storify : http://storify.com/asteris/egypt-first-free-presidential-elections